प्रधानमन्त्रीको – मृगौलाले काम गर्न छोड्यो ! – All top Here
Home/समाचार/प्रधानमन्त्रीको – मृगौलाले काम गर्न छोड्यो !
प्रधानमन्त्रीको – मृगौलाले काम गर्न छोड्यो !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृगौलाले राम्रोसँग काम नगरेको बताएका छन् । पार्टीको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मृगौलाले राम्रोसँग काम नगरेकाले अब नियमित डायलासिस र प्रत्यारोपण विकल्प भएको बताएका हुन् ।
‘मृगौलाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि शरीरमा पानी, क्रेटिनिन, युरिनजस्ता पदार्थको मात्रा बढेको छ । अब नियमित डायलासिस अथवा प्रत्यारोपण विकल्प छ, अहिलेचाहिँ नियमित डायलासिस नै गर्ने उहाँको कुरा छ,’ प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यका बारेमा गरेको ब्रिफ्रिङ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले केही रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले नियमित डायलासिस अथवा प्रत्यारोपणको विकल्प रोजिने बताएका जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको गत बुधबार ग्राण्डीमा पहिलो चरणको डायलासिस गरिएको थियो । बिहीबार दोस्रो चरणको डायलासिस गरिएपछि शनिबार वा आइतबार तेस्रो चरणको डायलासिस गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
१२ वर्षअघि भारतको नयाँदिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री त्यसयता नियमितजस्तो स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका छन् । साभार काठमाण्डौँ पाटीबाट
मोटरसाइ कल दुर्घटना दुईको घटनास्थलमै मृत्यु
काठमाडौंमा ८६ को कोरोना परीक्षण गर्दा दुईजनामा कोरोना पुष्टि
१० लाख ऋण लिएर २५ वर्षमा २९ लाख तिर्ने बैंकको गज्ज्बको अफर
ताला फोडेर पसिन् डा. निलम श्रीमानको घर